နှစ်ဖက်လုံးကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မတ်လ ၁၃ ရက်တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသော သတင်းထောက်တစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသားနှစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံများ
Criminal Swarn Arr Shins exposed. So Myanmar Gov should be pulled to ICC for Mass Murders and Genocide ကျောင်းသားသပိတ် ဖြိုခွဲသူ စွမ်းအားရှင်များတွင် မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ကျူးလွန်ခဲ့အချို့ပါဝင် »
ဘာကြောင့် မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်ထိ ခြေကျင်ခရီးနှင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ကျောင်းသားတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
ဘာကြောင့် တက္ကသိုလ်တွေကို တောကြိုအုံကြားပို့ခဲ့သလဲဆိုတာ အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
ချီတက်ရာလမ်းတစ်လျှောက် ကွေးအောင်ကနေတဲ့အပြုံးတွေ ဘယ်လောက်ချိုမြသလဲဆိုတာ ကျောင်းသားတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
အသက်မပါတဲ့ လက်အုပ်ချီ လက်ပြတဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုစုဆောင်းခဲ့ရသလဲဆိုတာ အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ခံရတုန်းက ဘယ်လိုရဲရင့်ခဲ့သလဲ ကျောင်းသားတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
ခမောက်တွေနဲ့ သမဂ္ဂအလံတော်ကို ဘယ်လောက်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သလဲ အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျွန်တော် ကျွန်မ နဲ့ ဘယ်လိုယဉ်ကျေးခဲ့သလဲ ကျောင်းသားတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ခင်ဗျား ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုရိုင်းစိုင်းခဲ့သလဲ အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
နေပြည်တော်စည်ပင်ရိပ်သာက တံခါးပိတ်ထားလို့ NNERကလူကြီးတွေနဲ့အတူ ကားပေါ်အိပ်ခဲ့ရတဲ့ ညအကြောင်း ကျောင်းသားတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
ဆယ်သိန်းတန်အမတ်တွေ အိပ်ငိုက်နေခဲ့တဲ့ နေ့တွေအကြောင်း အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
နာဂစ်မှာ ကူညီခဲ့လို့ ကျောင်းဆက်တက်မရအောင် ဘယ်လိုပိတ်ပင်ခဲ့လဲဆိုတာ ကျောင်းသူခေါင်းဆောင်ကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
ကျောင်းသားဟာ စာပဲကျက်ရမယ်လို့ ဘာကြောင့်ဝါဒဖြန့်ခဲ့သလဲ အစိုးရကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
အမဲဖျက်သလို ဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့အခါ ရေသန့်ဗူးဝေခဲ့တဲ့လက်တွေအတွက် နောင်တရမိသလား ကိုးတန်းကျောင်းသားလေးကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
-တရားဥပဒေနဲ့အညီဖြိုခွင်းခဲ့တာပါဆိုတဲ့စကားကို ဖြေစဉ် လိပ်ပြာလုံရဲ့လားလို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်
ကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့ သံတိုင်တွေကြားမှာ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ပါ
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့ လေအေးပေးစက်အောက် ငိုက်မြည်းနေတဲ့ အမတ်မင်းတွေကို လှုပ်နှိုးလိုက်ပါ
ရွှေပြည်ကြီးမှာ ထောင်ထွက်ဆိုတာ သူရဲကောင်းဆိုတဲ့အနက်လည်းဆောင်သေးတယ်ဆိုတာ လက်ခံသလား သာယာဝတီထောင်ကြီးကို မေးလိုက်ချင်တယ်
ခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားတိုင်း လူကြီးလူကောင်းဟုတ်ရဲ့လား နေပြည်တော်လွှတ်တော်အဆောက်အအုံကြီးကို မေးလိုက်စမ်းပါ
လူနာတင်ယာဉ်ကို လက်အရသာခံရိုက်ဖို့ သင်တန်းပေးခဲ့သလားလို့ ဥရောပသမဂ္ဂကို မေးလိုက်ချင်ပါရဲ့
ဒီရုပ်တွေက ကျောင်းသားလားဆိုတဲ့အမေးတွေကိုတော့ ပညာလိုအိုသည်မရှိဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်က အဖြေပေးလိမ့်မယ်
ကွန်မြူနစ်တွေကြိုးကိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲမှုကို တာဝန်ဆိုတဲ့လက်ပတ်တွေက လှောင်ရယ်နေလိမ့်မယ်
မတ်လမှာ မတ်ပြခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေနိုင်တယ်။ ။
Ps အင်တာနက်ပေါ် ရဲရဲတောက်ပြနေတာ လိပ်ပြာမလုံပါ အနည်းဆုံး ဒီဟာဖတ်ပီး အစိုးရမှိုင်းမိသူတွေ အမြင်မှန်ရလာခဲ့ရင် ကျေနပ်ပါတယ်
This entry was posted on March 14, 2015 at 12:17 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
3 Responses to “နှစ်ဖက်လုံးကို မေးခွန်းထုတ်ရမယ်”
drkokogyi Says:	March 14, 2015 at 12:31 pm | Reply မင်း သိုက်နေခ
ကျောင်းသားသပိတ်ကြားထဲမှ ဘာသာရေးဘက်ကို လှည့်ဖို့ ရန် ဝီရသူ ဦးဆောင် သော ၉၆၉ နှင့် /မ ဘ သ / အဖွဲ့ မှ ကြိုးပမ်းနေပါသည် စွမ်းအားရှင် လိုလို ဂိုဏ်းလိုလို မွေးထားသည့်ကောင်များနှင့် အစ်စလာမ် ကိုအကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မည့် လူအုပ်ထွက်လာစေရန် ဖန်တီးမှာလည်း စိုးရိမ် ရသေးသည်
သို့ သော် မ အောင် မြင် ပါ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မုတ်ဆိတ် ထားသူကို ကုလားဟု ပုပ်ခတ်ဖွဆွနေသည်
အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက် ပြည်သူကို ရန်တိုက် သတ်ဖြတ်ဖို့ ဝန်မလေးသည့် လူ့ မိစ္ဆာ အာဏာရှင်များ ၏ လုပ်ရပ်ဟာ အချိန်မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်
ထို့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်နှင့်နိုင်ငံရေး မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောနေတဲ့ သူများ ဖွန်ကြောင်နေတဲ့သူများလည်း ဝင် မဖွဆွ မဆဲဆိုပဲ အမှန်တရားကို ရှင်းပြ ၍ တတ်နိုင် သည့်ဘက်မှ ပြည်သူများကို Facebook မှတစ်ဆင့် လိုက်လံရှင်းပြ
တတ်နိုင်သလောက် အာဏာရှင် ယုတ်မာမူများကို တိုက်ဖျက်ဖို့ လိုအပ်နေပါသည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်
Facebook ဟာဖွလို့အကောင်းဆုံးလောင်စာ ဆိုရင်
အကောင်းဆုံးမီးသတ်ကား ဟာလည်း Facebook ပါပဲ
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို မနေပါနှင့်
ဖြစ်လိုက်မှ အောင်မလေး မာမီကယ်ပါဟု ခေါ်င်းပေါ်လက်တင်ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းရှိရာသို့
drkokogyi Says:	March 14, 2015 at 1:35 pm | Reply Eleven Media Group
ဆောင်းပါးရှင် – မောင်တင်ဦး (မြောင်းမြ)
drkokogyi Says:	March 15, 2015 at 3:26 am | Reply Swe Mon added4new photos.
MRTV က တကူးတက စင်တင် တင်ဆက်ပေးတဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မဘသ ကြော်ငြာချက်နဲ့
တနေ့က နာကူအသင်းကို ပို့တဲ့ အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ သ၀ဏ်လွှာနှစ်ခုကို ယှဉ်ဖတ်ကြည့်မိတယ်။
အရှင်ဆန္ဒာဓိက သ၀ဏ်လွှာကို ဖတ်မိလေလေ ရင်ထဲမှာ လှိုက်ကနဲနေအောင် ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ကြည်နူးမိရသလို…
မဘသ ကြော်ငြာချက်ကို တစ်ကြောင်းဖတ်မိလေ တစ်ကြောင်း အူသည်းလှိုက်လှိုက် စိတ်ပျက်ရွံရှာမိရတယ်။
စိတ်ဓာတ် အောက်ဆုံးတင်မဟုတ်၊ အနှုတ်လက္ခဏာတောင်ပြနေပါပြီ။ တနိုင်ငံလုံး တဖက်၊ သူတို့တဖက်မှာ အစိုးရဖက်က ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းဟာ မဘသ ဘုန်းကြီးတွေပါပဲ။
တခွန်းတည်း ပြောပါ့မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို မဘသ အမည်ခံ ဘုန်းကြီးစိမ်းတွေ ဖျက်နေပါပြီ။
ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ ကျောင်းသားတောင်းဆိုတာကို ဘုန်းကြီးက ကဖျက် ယဖျက် လုပ်တာ ဒါ ပထမဆုံးမြင်ဖူးတာပါပဲ။
ပြည်သူပိုင်တဲ့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲက ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ ကျောင်းသားတောင်းဆိုတဲ့ ဘတ်ဂျက် ၂၀% ကို မပေးချင်လို့ကို ယမယ်ရှာပြီး ပြန်နှိုက်ထုတ်တာဟာ အစိုးရတစ်ဖွဲ့တည်းတင် မဟုတ်ဘဲ အစိုးရမွေးထားတဲ့ ဘုန်ကြီးစိမ်းတွေ ဖြစ်နေတာကိုလည်း မြင်မိတာလည်း ပထမဆုံးပဲ။
ရင်အောင့်သွားလည်း မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ မြင်တာကို ပြောချမိတာပဲ။
အနီရောင်သင်္ဃန်းကို အပြင်က ပတ်ထားတဲ့ အစိမ်းရောင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်တွေကို မဘသ လို့ ခေါ်ပါတယ်။